Mahavita mihazakazaka Super Mario 64 amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ny mpandrindra Roystan Ross ao amin'ny bilaoginy dia nampiseho ny fomba fampandehanana Super Mario 64 amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny browser sy Web Unity Player. Dingana lehibe ho an'ireo tia emulator na lalao 64-bit mahazatra nefa tsy mila mametraka na inona na inona amin'ny fitaovana na jailbreak.
Ny ekipa TouchArcade dia nahavita nanamboatra an'ity kinova Ross ity mba hampandeha azy amin'ny iPhone 6 miaraka amin'ny fanaraha-maso ary izy ireo dia mampianatra antsika hahazo ny nifintsika lava. Izahay dia manararaotra mahatsiaro fa io indrindra no karazana lalao izay nolavin'i Nintendo tsy ho tafiditra ao anaty katalaogin'ny lalao ho an'ny iOS, izay tena mampalahelo anay.
Azo antoka fa tsy azo atao ny mamerina ny marimarina amin'ny mpanara-maso Nintendo 64 amin'ny efijery mikasika mba hahazoana tombony betsaka amin'ny lalao, fa ny be indrindra dia ny fampiasana ny fifehezana MFi anay (Mampiasa ny Logitech Powershell aho) miaraka amin'ireo kilasika Nintendo ireo, tsy azoko nofaritana ny fahatsapana fahasambarana mety hiteraka ahy.
Nintendo, taorian'ny taona maro tsy niraharahiany ny tsenan'ny smartphone, dia voatery niditra an-tsakany sy an-davany io tsena fisondrotana io noho ny tsy fahombiazany sy ny politikany mpandala ny nentin-drazana. Ny zava-misy fa ny Nintendo dia tsy hanamora ny fahafinaretantsika ny kilasiny amin'ny iOS dia tsy nampihomehy ireo mpankafy rehetraNa izany aza, ity horonantsary ity sy ny asan'ny mpamorona dia manamarina ny haben'ny mpanjifa maniry ireto karazana lalao ireto amin'ny finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Izy ireo dia mahavita mihazakazaka Super Mario 64 amin'ny iOS
Juas, gaga aho fa tsara izany. Tsy maintsy andramantsika izany, ary antenaiko fa hisy lalao maro kokoa hifanaraka.
Jay Saiyan Ruiz dia hoy izy:
Saingy tokony ho hitanao fotsiny izany any an-tsaha fisaka haha ​​tsy misy goba na zavatra hafa
Valiny tamin'i Jay Saiyan Ruiz
Christian Gimenez Lezcano dia hoy izy:
Valiny tamin'i Christian Gimenez Lezcano
Onek Fr-Mtb dia hoy izy:
Te hanana fanaraha-maso aho satria dick no misy azy io
Mamaly an'i Onek Fr-Mtb
Fanavakavaham-bolonkoditra inona. Aza manao an'izany 😞
Gabriel AleXis Castillo Mendoza dia hoy izy:
Tsy azo hazava kokoa izany: v
Valiny tamin'i Gabriel AleXis Castillo Mendoza
Ricardo Martin Mendez Escalante dia hoy izy:
Raha afaka mihazakazaka gta SA ireo fitaovana vaovao dia tsy hanana olana izany
Valiny tamin'i Ricardo Martin Mendez Escalante
Ny fampifanarahana lalao amin'ny rafitra iray dia tsy mitovy amin'ny fanahafana ny rafitra iray amin'ny iray hafa.
Juan Carlos Mrn Grc dia hoy izy:
Valiny tamin'i Juan Carlos Mrn Grc
Christopher Jorge Matos dia hoy izy:
Saingy, nilalao an'io tamin'ny Android tamin'ny emulator aho taloha -., Sary an-tsaina hoe miaraka amn'ny jailbreak dia tsy maintsy misy emulator, tsy zava-baovao izany ._.
Valiny tamin'i Christopher Jorge Matos
kionkiona dia hoy izy:
Heveriko fa tsy namaky ilay lahatsoratra ianao, ny mahatsikaiky dia ny fampiasan'izy ireo tranokala miaraka amin'ny Unity Player, mba hahafahan'ny tsirairay milalao azy io raha tsy mila Jailbreak na hametraka zavatra. Izay no vaovao.
Valiny amin'i LaComadreja
Eto dia manana ny zavatra rehetra ilainao ianao, https://roystanross.wordpress.com/super-mario-64-hd/